Kubaluleke kangakanani ukukhulumisana emphakathini wethu? Abanye ososayensi baye bathi ngaphandle kwalo besingeke sibe khona umphakathi uqobo. Akufani ngokuvamile sicabanga nendima eyadlalwa zokuxhumana ekuphileni kwethu, ukuxhumana nabanye abantu, abangabangane nabantu engingabazi. Uma uthatha iqembu elithile labantu futhi ekhipha kwabo kusukela zokuxhumana ingxenye arsenal, akunakwenzeka ukuthi bazokwazi ukufeza umsebenzi.
Uma lokhu isimo, imisebenzi zokuxhumana ziyinto ezibalulekile ngempela, empeleni esisemqoka kwindlela linikezwa njengamanje. Sithanda phikisana ukubaluleka isayensi, njalo ngikhohlwa okungasemuva, indima engakanani ulimi, yezilimi, Psychology nefilosofi.
Ngakho iziphi imisebenzi yokuxhumana ungabahlukanisa? Kuyinto Ukukhuluma kuwufanele ukuthi ososayensi baye akavumelananga mayelana esigabeni esisodwa, ngakho kukhona ongakhetha ahlukahlukene iqoqo imisebenzi.
Kungcono ukuqala definition ezibanzi imisebenzi esemqoka. Kulokhu, ibhekisela yokuthi abantu emphakathini ukuxhumana nabanye ngenxa yezizathu ezehlukene. Noma kunjalo, konke kubo ngempela kalula futhi ngempumelelo ihlukaniswe izinhlobo eziningana namaqembu.
umsebenzi Wokulawula futhi kuchumana.
umsebenzi Ngokuphumelelayo yekuchumana.
Esimweni sokuqala libhekisela imithetho ethize yokuziphatha eyamukelwa umphakathi. Lena imithetho esingashiwongo ukuthi wonke umuntu kanje. Ukuxhumana uba yithuluzi elinamandla ngokwanele wesi, ngenxa ukuthi wonke amalungu umphakathi ngokushesha baba nesimo kwezinkambiso ethize yokuziphatha kahle. Ngakho, imisebenzi zokuxhumana zihlanganisa ukulawulwa ukuziphatha komuntu siqu futhi ukuziphatha kwabantu ababazungezile.
Kuyaphawuleka ukuthi sibonga lo msebenzi, ukuphatha ukwakha umphakathi lwahlangana kanti futhi ephelele noma amaqembu abantu athize, bakwazi ukuxazulula izinkinga futhi sifinyelele imigomo ethile.
Ngaphansi effektino umsebenzi yekuchumana iyona ingxenye ngokomzwelo yokuxhumana. Abantu zihlukaniswe Imininingwane nje kuphela kodwa futhi imizwelo, ngaphandle kunzima ukucabanga "bukhoma" zokuxhumana. Lokhu kuwachaza kahle isifiso ukusebenzisa i-intanethi-izincwadi "Izithonjana", ngoba zisiza ziveza imizwelo elingekho.
Noma yimuphi umsebenzi yokuxhumana Psychology iphathwa ngokwehlukile ngoba ngokwalo yakhiwa izici eziningi.
Ngomqondo iyincane kungenzeka ukwehlukana Izinjongo ezahlukene, ancike enhlosweni yabo. Lona kwakuwumsebenzi ngezigaba ezithakazelisayo futhi enembile. Abanye ochwepheshe ubamba nje umbono onjalo.
Imininingwane - zokuxhumana ukuze ngixhumane omunye umuntu.
Isisusa - zokuxhumana ukuze ibenze interlocutor noma yini.
Info - zokuxhumana ukuthi abelane ngolwazi.
Coordination - zokuxhumana isinyathelo okwakuvunyelwene ngawo kanye nokudidiyela emsebenzini.
Emotive - zokuxhumana ukuze adlulisele nemizwa nemizwelo.
Linendawo ekhethekile zokuxhumana Pedagogical, okusho ukuxhumana phakathi uthisha nabafundi. Lolu hlobo lwe-a out ezimbalwa ngezigaba jikelele, ngoba ihlanganisa nezinye imisebenzi eminingana - kusebentisana, ulwazi, isisusa, contact, njll Imisebenzi yokuxhumana Pedagogical luyindida kakhulu futhi wenziwa endaweni ebanzi kunalokho kungase kubonakale efika kuqala.
Ngo inqubo yokukhula ingane egcina izigaba komphakathi kanye nesazisi kumiswa. Akunakwenzeka ukuthi le nqubo kungaba ephelele ngaphandle zokuxhumana. Isakhiwo kuhlanganisa isakhi okuqonda - Umbono ngokushesha futhi ukuqeqeshwa nge ukulinganisela okuhambisanayo nasesifundvweni sekuvisisa siqu ulwazi olusha.
Ungayithathi kalula umsebenzi yokuxhumana emhlabeni wanamuhla. Kulesi ukwakha ubuhlobo futhi ngaphandle kwalo ngeke isebenze ukuze bafinyelele imigomo yabo, ukuze siqhubekele phambili ukuthuthukisa ulwazi olusha njalo njalo. Lena emqoka emphakathini futhi iqembu ahlukene yentuthuko abantu.
Negesi bog: kanye ifomula nokusebenzisa
Yiziphi ama-athomu nezinhlayiyana ezincane?
Indlela yokukhulisa imisedari emthini womuthi ekhaya nasemkhakheni wensimu?
Olga Krasko: Filmography, biography nokuphila kwangasese (isithombe)
Izinyawo ngithola, yini okufanele uyenze esimweni esinjalo,
Nezilwanyana ezincane Pathogenic - imbangela yezifo ezithathelwanayo
Izivakashi Russian Ukhetha ezindlini
Ukuhlela ukwakheka Frenk Buyela Umva: Biography, izithombe
Broken iqakala: indlela okufanele sihambe ngayo ukhonkolo usimende (offset)